Fiara modely resin, fiara maodely vita amin'ny vy, fiara maodely plastika - vato telo
Ny Porsche 911, nantsoina tamin'ny voalohany hoe 901, dia nanomboka tamin'ny 1967 ary hita amina fikirakirana vatana maro, ao anatin'izany ny variana Targa. Ny Targa dia azo novidiana tamin'ny alàlan'ny motera efatra voafantina, namokatra teo anelanelan'ny 130 sy 160 ny horsepower toy ireo maodely hafa tafiditra ao anatin'ny andiany 1967.
Ity maodely ity dia naseho tamina tafo azo esorina sy efijery malefaka aoriana.
Ny iraka ataontsika: Ny tena fiara teraka noho ny maodely.
Ny fahitanay: Avelao ny mpanjifa hanohy hidera anay.
Ny fanahinay: Avelao ny mpiasa hiasa am-pifaliana hatrany.
Ny filozofianay: Misy hatrany ny faritra WIN-WIN ary tsy misy orinasa azo resahina.